ESI JIKỌỌ ERIRI USB USB NA EKWENTỊ MA Ọ BỤ MBADAMBA EKWENTỊ - N'IHI BEGINNERS - 2019
Ọ bụghị onye ọ bụla maara banyere ike ijikọ USB flash mbanye (ma ọ bụ ọbụna diski ike mpụga) na smartphone, mbadamba ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ ndị ọzọ, nke na ụfọdụ nwere ike ọbụna bara uru. N'ime ntuziaka a, ọtụtụ ụzọ iji mejuputa atumatu a. Na akụkụ mbụ - esi ejikọta USB flash mbanye na ekwentị na mbadamba nkume taa (ya bụ, na ngwaọrụ ndị dịtụ ọhụrụ, na-enweghị mgbọrọgwụ), nke abụọ - na ndị okenye, mgbe ụfọdụ chọrọ iji jikọọ.
Ozugbo ahụ, ana m achọpụta na n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na m kwuru nrụrụ USB dịpụrụ adịpụ, ọ bụrụ na ọ na - amalite (ekwentị apụghị ịhụ ya), enweghị ike nwere ike imebi ụgbọala ahụ. Naanị ngwa USB ndị ọzọ na-eji ike nke aka ha nwere ike iji ya na ngwaọrụ mkpanaka. Ijikọ ụgbọ oloko adịghị mkpa, mana ka na-atụle ịgbanye batrị ngwaọrụ ahụ. Site n'ụzọ, ị nwere ike iji ụgbọala ahụ ọ bụghị naanị iji nyefee data, kamakwa iji mepụta ngwa USB flash maka kọmputa na ekwentị.
Ihe ịchọrọ iji jikọọ USB USB na gam akporo
Iji jikọọ eriri USB USB na mbadamba ma ọ bụ ekwentị, nke mbụ ị chọrọ enyemaka ndị ọbịa USB site na ngwaọrụ n'onwe ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere nke a taa, n'ihu, ebe tupu Android 4-5, ọ bụghị ya, ma ugbu a, ekwetaghị m na ụfọdụ ekwe ntị dị ala anaghị akwado. Ọzọkwa, iji jikọọ USB USB, ị ga-achọ ma ọ bụ USB OTG (n'otu njedebe - MicroUSB, MiniUSB ma ọ bụ USB Type-C njikọ, na nke ọzọ - ọdụ ụgbọ mmiri iji jikọọ ngwaọrụ USB) ma ọ bụ USB flash drive, nke nwere nhọrọ abụọ njikọta (azụmahịa nwere enwere "ihe dị na nsọtụ abụọ" - na USB mbụ n'otu akụkụ na MicroUSB ma ọ bụ USB-C na nke ọzọ).
Ọ bụrụ na ekwentị gị nwere njikọ USB-C ma enwere ụfọdụ ntanetị USB Type-C ị zụrụ, dịka ọmụmaatụ, maka laptọọpụ, ha ga-arụ ọrụ maka ọrụ anyị.
Ọ dịkwa mma ka flash drive nwere usoro faịlụ FAT32, ọ bụ ezie na ọ bụ mgbe ụfọdụ ka ọ ga-arụ ọrụ na NTFS. Ọ bụrụ na ihe niile ịchọrọ dịnụ, ịnwere ike ịga ozugbo na njikọ ma rụọ ọrụ na ngwa USB flash na ngwaọrụ gam akporo gị.
Usoro nke ijikọ ụgbọ oloko na ekwentị Android ma ọ bụ mbadamba na ụfọdụ nuances nke ọrụ
Na mbụ (banyere mbipute nke gam akporo 5), iji jikọọ eriri flash USB na ekwentị ma ọ bụ mbadamba, achọrọ ohere mgbọrọgwụ ma ọ dị mkpa iji nweta mmemme ndị ọzọ, ebe ngwaọrụ ngwaọrụ anaghị ekwe ka ime nke a mgbe niile. Taa, maka ọtụtụ ngwaọrụ na Android 6, 7, 8 na 9, ihe nile ịchọrọ ka a na-arụ n'ime usoro ahụ ma na-enwekarị eriri flash USB "anya" ozugbo njikọ.
Na oge ugbu a, iwu nke ijikọ USB flash mbanye gaa gam akporo bụ:
Anyị jikọọ ụgbọala site na USB OTG ma ọ bụ ozugbo ma ọ bụrụ na ịnwe USB flash drive na USB-C ma ọ bụ Micro USB.
N'okwu ikpe (ma ọ bụghị mgbe niile, dịka e gosiri na paragraf nke 3-5) nke ebe ngosi ahụ, anyị na-ahụ ọkwa sitere na gam akporo na eriri USB nwere ike iwepu. Na onyinye imeghe onye njikwa faịlụ.
Ọ bụrụ na ịhụ ozi ahụ "Enweghị ike ijikọ USB", ọ na-apụtakarị na windo na-agba ọsọ na usoro ntinyeghị aka (dịka ọmụmaatụ, NTFS) ma ọ bụ na ọ nwere ọtụtụ partitions. Banyere ịgụ na ide NTFS flash draịvụ na Android mgbe e mesịrị na isiokwu.
Ọ bụrụ na arụ ọrụ njikwa faịlụ nke atọ na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, ụfọdụ n'ime ha nwere ike "ịghachite" njikọ nke draịvụ USB draịvụ na gosipụta ngosi nke njikọ ha.
Ọ bụrụ na ọkwa adịghị egosiputa ma ekwentị ahụghị USB USB, nke a nwere ike igosi na: enweghi enyemaka USB na ekwentị (ọ bụ ezie na anaghị m ezute ihe ndị a n'oge na-adịbeghị anya, ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume na android) maọbụ ị jikọọ Ọ bụghị ngwa USB USB, kama ọ bụ draịvụ ike mpụga nke enweghị ike zuru ezu.
Ọ bụrụ na ihe niile gara nke ọma ma jikọọ flash drive, ọ ga-adịrị mfe iji ya ghara na njikwa faili ahụ, ma na ndị ọzọ, lee Mana Njikwa Kasị Mma maka gam akporo.
Ọ bụghị ndị ọrụ faili niile na-arụ ọrụ na draịva flash. Site na ndị m na-eji, enwere m ike ịkwado:
X-Plore File Manager - adaba, free, na-enweghị ihe mkpofu na-enweghị isi, multifunctional, na Russian. Ka iji gosi USB flash, gaa "Ntọala" ma mee ka "Nye ohere site na USB".
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu maka gam akporo.
ES Explorer - enwere otutu ntinye na ya n'oge na-adịbeghị anya ma agaghị m akwado ya ozugbo, mana, n'adịghị ka ndị gara aga, na ndabara, ọ na-akwado ịgụ site na NTFS flash draịvụ na gam akporo.
Na Total Commander na X-Plore, ị nwekwara ike ịme ọrụ (ma gụọ ma dee) na NTFS, ma naanị na Microsoft exFAT / NTFS maka USB site na Paragon Software akwụ ụgwọ (nke dị na Ụlọ Ahịa Play, ịnwere ike ịnwale ya n'efu). Ọzọkwa, ọtụtụ ngwaọrụ Samsung na-akwado na-arụ ọrụ na NTFS site na ndabara.
Buru n'uche na ọ bụrụ na ị naghị eji ya ruo ogologo oge (ọtụtụ minit), ekwentị USB ejikọrọ ejiri gbanyụọ ya site na ngwaọrụ Android iji chekwaa batrị (na njikwa faịlụ ahụ ọ ga - adị ka ọ nwụọ).
Ijikọ USB USB na ochie Android smartphones
Ihe mbụ, na mgbakwunye na USB OTG USB ma ọ bụ USB flash drive kwesịrị ekwesị, nke kachasị mkpa mgbe ejikọta abụghị ihe ọhụrụ gam akporo ngwaọrụ (ma e wezụga Nexus na ụfọdụ ngwaọrụ Samsung) bụ ohere mgbọrọgwụ na ekwentị gị. Maka ihe nlereanya ekwentị ọ bụla, ịnwere ike ịchọta ntuziaka dị iche iche na Ịntanetị iji nweta ohere mgbọrọgwụ, na mgbakwunye, enwere mmemme zuru ụwa ọnụ maka ebumnuche ndị a, dịka ọmụmaatụ, Kingo Root (a ga-ahụta na usoro maka inweta nweta mgbọrọgwụ nwere ike ịdị ize ndụ maka ngwaọrụ ahụ na maka ụfọdụ ndị na-emepụta ya na-ewepu gị mbadamba nkume ma ọ bụ ekwentị).
Ị nwere ike ịnweta (ọ bụ ezie na ọ bụghị nke zuru ezu, ma maka ọtụtụ ihe ngosi eji eme ihe) Android na flash drive n'enweghị mgbọrọgwụ, mana ma ngwa abụọ na-arụ ọrụ maka nzube a, nke m maara, na-akwado nanị Nexus ma kwụọ ụgwọ. Aga m amalite n'ụzọ ma ọ bụrụ na ị nwere ohere mgbọrọgwụ.
Jiri StickMount iji jikọọ flash drive na gam akporo
Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere mgbọrọgwụ na ngwaọrụ ahụ, mgbe ahụ iji ngwa ngwa na-ekpuchi windo ahụ ma na-enweta ya n'aka onye njikwa faili ọ bụla, ịnwere ike iji ngwa StickMount na-arụ ọrụ (enwerekwa ụgwọ Pro) nke dị na Google Play //play.google.com /store/apps/details?id=eu.chainfire.stickmount
Mgbe ejikọsịrị, họta oghere ndabara StickMount maka ngwaọrụ USB a ma nyefee ikikere ikike iji ngwa ahụ. Emeela, ugbu a ị nwere ike ịnweta faịlụ na flash drive, nke na njikwa faili gị ga-adị na sdcard / usbStorage folder.
Nkwado maka usoro faịlụ dị iche iche na-adabere na ngwaọrụ gị na femụwe ya. Dị ka a na-achị, ndị a bụ abụba na abụba32, yana ext2, ext3 na ext4 (usoro Linux faịlụ). Buru nke a n'uche mgbe ị na-ejikọta bọtịnụ NTFS flash.
Ịgụ faịlụ site na mkpo ọkụ na-enweghị mgbọrọgwụ
Ngwa abụọ ọzọ na-enye gị ohere ịgụ faịlụ site na USB flash drive na gam akporo bụ Nexus Media Importorter na Nexus USB OTG FileManager na ha abụọ anaghị achọ ikike mgbọrọgwụ na ngwaọrụ ahụ. Ma ha abụọ akwụ ụgwọ na Google Play.
Ngwa ahụ rịọrọ nkwado ọ bụghị naanị FAT, ma NTFS partitions, mana site na ngwaọrụ, ọ dị mwute ikwu, nanị Nexus (ọ bụ ezie na ị nwere ike ịchọpụta ma Nexus Media Importer ga-arụ ọrụ na ngwaọrụ gị ọ bụghị site na nke a site nbudata ngwa n'efu iji lee foto na ngwa igwefoto - Nexus Photo Viewer si otu Onye Mmepụta).
Anaghị m anwale onye ọ bụla n'ime ha, ma na-ekpe ikpe site nyochaa, ha na-arụ ọrụ dị ka atụ anya na Nexus igwe na mbadamba, n'ihi ya, ozi ahụ agaghị adị oke.